Kismaayo News » Kenya oo sheegtay inay amaanka deegaamada Soomaalida sugayso
Kenya oo sheegtay inay amaanka deegaamada Soomaalida sugayso
Kn: Dawladda Kenya ayaa shaacisay in gobolka waqooyi bari ee Soomaalidu degto ay wax ka qabanayso amaanka sii xumaanaya iyo hawlgallada ay Shabaabku ka wadaan ee sii kordhaaya.
Boqolaal ciidamada booliska iyo kuwa milatariga ayay Kenya gaysay soohdinta gaar ahaan degmada Mandera. Khuburada dhinaca amaanka ayaa u arka talaabadani ay Kenya ciidamada dheeraadka ah ku gaysay Mandera inay tahay boor isku qarin ku aadan in ciidamadan lagu caburiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Buulo-Xaawo kuwaasi oo si geesinimo leh uga horyimid gidaarka ay ka dhisanayso meel gudaha Soomaaliya ka xigta soohdinta.
Kaymaha u dhexeeya wabiga Tana iyo Lamu ayay xarakada Alshabaab ku leeyihiin saldhigyo ay ka fuliyaan weerarada ay ka gaystaan gobolka, sidaasi ooy tahay hadana dawladda Kenya way iska indho tiraysaa oo waxaa u cad oo kaliya xalaalaysiga dhulka ama xeebta Soomaaliyeed.
Sargaal diiday in magaciisa la sheego oo KismaayoNews la hadlay ayaa sheegay in hadii Kenya ay daacad ka tahay in amaanka gobolka waqooyi bari wax laga qabto ay tahay in dadka deegaanka loo sameeyo ciidamo u gaar ah oo ilaaliya amaan kooda laakiin uusan amaan u sugayn wiil laga keenay Nakuru iyo meel kasii xagaysa, hadii uusan shacabka dhib u gaysan ayayba buro sidaan ayuu hadal kiisa ku soo gabogabeeyay.